Забур 23 CARS - Nnwom 23 AKCB
1Awurade ne me hwɛfo, hwee renhia me.
2Ɔma meda wura frɔmfrɔm adidibea;
ogya me kɔ nsu a ɛho dwo ho,
3odwudwo me kra.
Ɔde me fa akwantrenee so,
ne din nti.
owu sum kabii mu mpo a,
minsuro bɔne bi,
efisɛ wo ne me na ɛwɔ hɔ;
wʼabaa ne wo pema
na ɛkyekye me werɛ.
5Woto me pon wɔ
Wode ngo fɔw me tirim;
me kuruwa yɛ ma bu so.
6Yiye ne adɔe nko na ebedi mʼakyi
me nkwanna nyinaa;
na mɛtena Awurade fi
AKCB : Nnwom 23